Izandla zezingane ezenziwe ngephepha
Iphupho ngalinye lomzali wengane ehlakaniphile, efundisiwe, ekhuthele futhi ephendulayo. Imidlalo ehlukahlukene yezemfundo, amathoyizi, ama-rugs - konke lokhu kuzokusiza emfundweni. Kuhle kakhulu ukuboleka izingane ngezobuciko ezihlukahlukene ezenziwe ngephepha, i-plasticine, inhlama. Namuhla sizokhuluma mayelana nokwenza imishini eyenziwe ephepheni.
Ikhasi - ikhanda.
Amateyimu wokunamathisela ahlukahlukene.
Izikhali (okungcono ngamalayini afakiwe).
Amapensela embala noma amanothi.
Ukubekezela kanye nefantasy.
Flower kusuka candy wrappers
Sonke sithande amnandi, futhi emva kwabo okusele? Kulungile, ama-candy wrappers. Kusukela kumbuthano okhona okhona, mhlawumbe ngezikhali ezifakiwe. Sithatha ama-candy wrappers angu-4-5 futhi siwafake ngesigamu. Ngomgodi wokugoba senza izimbobo phakathi, kodwa u-0.5 cm kusuka emhlanjeni. Sithatha amanye ama-candy wrappers angu-2, futhi wengeze futhi wenze imbobo phakathi, kodwa emgqeni wokugcoba (okungukuthi uma uvula i-wrapper, uzoba nomgodi ngqo phakathi kwe-wrapper). Siqoqa imbali. Ngenduku evela ngaphansi kwama-chocolates noma ipayipi yokuphuza, gcoba phakathi kwembali. Kungenziwa, isibonelo, kusukela usayizi ofanele we-polystyrene womumo ojikelezayo, obhalwe ngephepha elinemibala. Ngotshani sinezintambo zokuqala ezingu-4-5 "izikhala" ezihlanjwe ngesigamu se-candy wrappers enomgodi ojwayelekile bese ubasabalalisa embuthanweni. Khona-ke simboza konke lokhu nge-candy wrappers ezimbili eveziwe enomgodi ophakathi. Ethempini enamathele eluhlaza, sibamba ucingo, kusuka phezulu sibamba esinye isiqeshana se-tape futhi sinqume amahlamvu emaphethelweni. Bese ugoqa ucingo ngesigamu, uwubophe nxazonke embali bese uyilungisa. Sithola imbali ekulungele. Lokhu kuhle ngoba amaholide angasetshenziswa njengamangala noma umklomelo, ukuhlobisa ikhandlela ngenduku.
Lezi zenzi zezingane zilula futhi zingenziwa ngokushesha. Ngalokhu sidinga isifanekiso sephepha nezilwane (zingalandwa kusuka ku-intanethi noma zisungulwe wena ngokwakho). Kungcono uma ulungiselela izifanekiso kusukela kwikhadibhodi kusengaphambili, bese uzidlulisela ephepheni, umeme umntanakho ukuthi upende isithombe bese unquma isibalo. Imfihlo yomsebenzi wukuthi isibalo sithathwa kabili. Isibonelo, ukwenza indlovu udinga ukudweba isibalo sezindlovu ephepheni bese wenza isithombe sesibuko kuso, kodwa imidwebo kufanele ithinte ohlangothini oluvame, isibonelo, ngemuva kwakho. Uma unquma isibalo uphinde uwufake uhhafu, uzoba nendlovu enezinhlangothi ezimbili ongayifaka etafuleni. Ukuze ucindezele lo msebenzi, ungaphakamisa ukuthi ingane akufanele idwebe, kodwa usike izinto ezivela ephepheni elimibala bese ulinamathisela phansi. Ngakho-ke, isibonelo, emathineni aphuzi noma e-orange azinamathisela izindawo ezinobundu, umsila, izindlebe namehlo. Ingane ngeke ikwazi ukwenza kuphela isibalo, kodwa futhi udlale isikhathi eside e-zoo.
Ukuze udale lo msebenzi, udinga ukwenza uhlamvu lwesayizi oludingayo kusuka ephephandabeni, uvele ulinyathele. Khona-ke inhlama ihlanganiswe ephepheni elibomvu ukuze izicucu zihlangene. On iphepha elimnyama, yenza umjikelezo webhola lobubanzi obufanele futhi upende ikhanda. Ithempulethi inqunywe futhi ihlanganisiwe kuyo kusukela ohlangothini olungaphambili lwe "ladybug". Into ehlala encane: kusuka ephepheni elimnyama yenza futhi unamathisele imibuthano - amachashazi kanye nemivimbo, ezohlukanisa futhi ifake amaphiko, gcoba izintuthwane kanye nama-paws. Kusuka emhlophe iphepha senza amehlo futhi sidonse abafundi kuzo.
I-Octopus ngemizuzu engu-10
Bonke abantwana bathanda ukuchaza isandla sabo - indlela enhle yokwenza i-octopus. Emaphepheni onemibala ohlangothini olungalungile, udwebe ungqimba noma isandla somntwana. Sika lesi sigaba kulo mzila. Njengoba ucabanga - iminwe imilenze. Kuhlala kuphela ukusika iphepha lombala wamehlo nezembatho ze-octopus. Kungaba ingubo, isigqoko noma i-suti, uma i-octopus-boy. Uma ingane yakho ibheka i-cartoon mayelana ne-octopus ukuhamba, ungakha ngale ndlela izindlela ezimbalwa zembala ehlukene - uzothola umndeni ojabulayo.
Kusukela kumathoyizi wezingane zephepha ukukwenza kalula. Umsebenzi ohlangene ngeke nje kukusize uqale ukuxhumana okugcwele nengane, kodwa futhi uthuthukise amakhono emoto, umcabango, inkumbulo nokuzijabulisa.
Amakilasi ekwelapheni kokukhuluma nabasenkulisa
Indlela yokutshela ingane encane ukuthi ubaba ushiye umndeni
Indima yokudlala ekuthuthukiseni izingane
Incazelo yegama labantwana ngamantombazane encwadini "A"
Ezinye umehluko phakathi kwezingane kusuka kubantu abadala
Inkimbinkimbi emifushane yokuzivocavoca komgogodla
Izitayela ze-Fur ebusika
Silahla amabala amhlophe ebusweni nangaphansi kwamehlo
Indlela engcono yokunqoba ukwesaba kwakho ukuwubuka ngqo
Isobho elibandayo lamakhukhamba nge-hertic ephihliwe i-Baltic
Indlela yokukhetha amakhethini afanele namakhethini